Wasiirada Soomaaliya oo ansixiyey hindise sharciyeedka Iibka Qaranka – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Wasiirada Soomaaliya oo ansixiyey hindise sharciyeedka Iibka Qaranka
22nd May 2014 A warsame Af Soomaali 0
Muqdisho, May 22, 2014 — Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya, Cabdiweli Sheekh Axmed Maxamed ayaa maanta shir guddoomiyey kulanka caadiga ah ee Golaha Wasiirada oo lagu ansixiyey Hindise-sharciyadeedka Iibka Qaranka iyo heshiis dhinaca xog ururinta ah oo ay dowladda Soomaliya la gashay shirkadda CGG oo laga leeyahay waddanka Switezerland.
“Sharciga Iibka Qaranku waxa uu muhiimad u leeyahay nidaaminta qaabka ay dowladdeenu wax u soo iibsan doonto iyo qaabka ay u maaraynayso qandaraasyada. Hadda kaddib dhammaan qandaraasyadu waxay noqon doonaan kuwo si xaq ah loogu tartamo.
Human Rights Watch oo eedeysay maxkamada ciidamada Soomaaliya